Ama-ecosystems athatha isikhathi eside futhi isikhathi eside ukuthola kabusha ngemuva kwesomiso Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba amazinga okushisa aphakathi komhlaba ekhuphuka ngenxa yokushisa komhlaba, isomiso kulindeleke ukuthi sande kakhulu futhi sibe nzima kakhulu ezifundeni eziningi zomhlaba. Kunocwaningo olusha olukhombisa lokho imvelo yasemhlabeni ithatha isikhathi eside ukuthi itholakale esomisweni sakamuva kunangesikhathi samashumi amabili.
Ukwanda kwamazinga okushisa aphakathi komhlaba kungadala ukuthi imvelo ingaphinde ilulame ngokuphelele. Lokhu kungaholela ekufeni kwezihlahla, ngakho-ke, ekuphumeni okukhulu kwamagesi abamba ukushisa.
1 Ngemuva kwesomiso
2 Idatha yesikhathi esizayo
Ithimba likaChristopher Schwalm, waseWoods Hole Research Centre, eFalmouth, eMassachusetts, e-United States, kanye noJosh Fisher waseNASA ezweni elifanayo, balinganise izikhathi zokululama ngemuva kwesomiso ezifundeni ezahlukahlukene zomhlaba. Ukukala lokhu, kusetshenzisiwe ukuqagela okuvela kumamodeli wesimo sezulu nezilinganiso ezisuka phansi.
Isiphetho socwaningo ukuthi kuthatha isikhathi eside futhi isikhathi eside ukuthi cishe zonke izindawo zomhlaba ziphinde zithole emuva kwesikhathi sesomiso. Kunezifunda ezimbili ezisengozini enkulu kulokhu. Le yindawo yezindawo ezishisayo nalabo abasezindaweni eziphakeme ezisenyakatho. Kulezi zindawo zombili isikhathi sokululama ngemuva komcimbi wesomiso besiside kakhulu kunezinye.
Uma usemkhathini ungabona wonke amahlathi aseplanethi kanye nezinye izinto eziphilayo nendawo ezishayelwa yisomiso ngendlela ephindaphindwayo. Njengoba amazinga okushisa aphakathi komhlaba ekhula, isomiso siya ngokuya siba namandla kakhulu.
Idatha yesikhathi esizayo
Idatha eqoqwe esikhaleni ikuvumela ukuthi uqinisekise lokho kufanekiswa kwesimo sezulu esedlule nesamanje, nakho okusiza ekunciphiseni ukungaqiniseki ekuqageleni kwesimo sezulu esizayo.
Isikhathi esisithathayo ukuthola imvelo kabusha kuyipharamitha ebalulekile ukuze kuhlolwe ukuthi kungenzeka yini ukuthi kusinde okufanayo ezimweni ezimbi kakhulu. Kuyasiza nokwazi ukuthi yini umkhawulo lapho izihlahla ziqala ukufa ngenxa yokuntuleka kwamanzi.
Izikhathi ezimfishane phakathi kwesomiso, kuhlanganiswe nezikhathi ezinde zokululama, kungaholela ekufeni kwesihlahla okusakazekile, kunciphise ikhono lezindawo ezithintekile ukumunca ikhabhoni esemkhathini.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isomiso » Ama-ecosystems athatha isikhathi eside futhi isikhathi eside ukuthola emuva kwesomiso
Ukuguquka kwesimo sezulu kuguqula ukufika eSpain `` kwezinyoni ezingavamile ''